हाम्रो बारेमा - कोम
उज्यालो, रंग, खुशी र CUTE।
यी सुविधाहरू के हुन् हाम्रो अनलाइन स्टोर को प्रकृति परिभाषित गर्दछ।
हामी मूर्तिहरु द्वारा लगाएको Kpop फेशन प्रदान गर्दछौं।
हामी तिनीहरूलाई तपाईंको नजिक ल्याउन चाहन्छौं! मा हामीले ल्याउने कोडम तपाईं सुन्दरले भरिएको पसल K-POP फेशन पोशाक परिधान र सहायक उपकरण, t-shirts देखि hoodies to hats .... हामीसँग यहाँ सबै तपाईंको लागि छन्!
कोडम यस्तो स्टोर हो जहाँ ग्राहकहरू आफ्ना मनपर्ने मूर्तिको नयाँ फेशनका लागि किन्न सक्छन्। हामी हाम्रो अनलाइन फेसबुक र इन्स्टाग्राम पृष्ठमा धेरै सामाजिक र सक्रिय छौं जहाँ हामी हाम्रा सबै पछिल्ला र नयाँ तातो आइटमहरू प्रदर्शन गर्न हामी सक्दो प्रयास गर्छौं।
हामी तपाईलाई सबै भन्दा राम्रो कपडा र किफायती मुल्यमा आईटमहरू ल्याउन कोसिस गर्दछौं जुन तपाईंलाई अधिकको लागि फिर्ता आउँनेछ। हामी विश्वस्त छौं हाम्रोमा १००% ग्यारेन्टी सेवा!
हामीलाई लाग्छ कि हामीले हाम्रा ग्राहकहरूसँग बलियो र विश्वासयोग्य सम्बन्ध निर्माण गर्नु आवश्यक छ र त्यसैले हामीसँग तपाईंको सबै आवश्यकताहरू र जिज्ञासाहरू पूरा गर्न कडा मेहनत गर्ने टीम छ।
हामी हाम्रो चीजहरूको लागि छिटो डेलिभरी प्रदान गर्नमा गर्व गर्दछौं। हामी सकेसम्म सकेसम्म सबै अर्डरहरू संसाधित र पठाउनको लागि सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्दछौं।
हामी सुनिश्चित गर्न कडा मेहनत गर्छौं कि कुनै पनि ग्राहकको अर्डरको साथ कुनै समस्या छैन।
जून २०१ 2016 देखि यो कोडम वेबमा व्यवसायमा छ र हामीले कुनै गुनासो वा फिर्ताको लागि कहिले पनि अनुभव गरेनौं।
हामीसँग तपाईंको K-POP मूर्तिहरूसँग नजिकको महसुस गर्नुहोस्, यो Kdom - तपाईंको K-POP शपिंग मल्ल।
कोम सोशल मिडिया
हाम्रो समर्थन टीम उच्च प्रशिक्षित र सकेसम्म चाँडो सबै ग्राहकको जिज्ञासालाई जवाफ दिन प्रेरित छ
माथिको सूचीबद्ध हाम्रो सामाजिक मिडिया खाताहरूमा Kdom को साथ अपडेट रहनुहोस्।